Shiinaha Raadinta iyo dejinta robotka HY-1010B-140 Soo-saare iyo Badeecad | Yunhua
HY-1010B-140 Robot waa aalado rarka iyo dejinta, oo inta badan loo adeegsado unugyada wax soo saarka iyo khad toos ah oo wax soo saar si loogu farsameeyo quudinta maran, ka shaqeynta inta udhaxeysa qalabka shaqada, qalabka mashiinka iyo habka mashiinka qalabka wax lagu beddelo ee loo maro qalabka shaqada iyo wareejinta shaqada, lathe, shiidi, shiidi, qodida iyo qalabka kale ee mashiinka wax lagu jaro iyo wax soo saarka otomaatiga ah. Robotyadu waxay ku guuleystaan ​​nidaam wax ku ool ah oo si otomaatig ah u raritaan ah iyo soo dejin iyagoo adeegsanaya silo quudinta otomaatiga ah, suunka isweydaarsiga.
Rakibada aaladaha warshadaha iyo soo dejinta waxaa loo isticmaali karaa howsha lathe, sida CNC lathe, xarunta makiinada, feer iwm .Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa qaadashada walxaha, quudinta, ururinta iyo wixii la mid ah. Ficil ahaan, mishiinka wax soo dejinta iyo dejinta otomaatiga ah ayaa ku dhowaad si ballaaran loogu isticmaali karaa wax soo saarka warshadaha. Waxay leedahay faa'iidooyinka hawlgalka habboon, waxtarka sare iyo tayada shaqada ee sare.
Q1.Mar badbaado ma u tahay shaqaalaha?
A. hubi, mid ka mid ah faa'iidooyinka loo adeegsado robot-ka xulashada iyo goobta ayaa ka ilaalinaya shaqaalaha dhaawacyada. Hal shaqaale ayaa maamuli kara 5 ~ 6 unug mashiinka CNC.
Q2. Noocee noocee ah ayaa isticmaali kara aaladda rarka iyo dejinta robotka?
A. Mid kasta oo mashiinka mashiinka sameeyaha ah waxaa lagu dhejin karaa qalab gacan-ku-habboon ah oo ku habboon mashiinkaaga iyo sheygaaga. Aad ayey u saxsan yihiin waxayna sidoo kale leeyihiin dabacsanaan si ay qaybta ugu ilaaliyaan taxaddar.
Q3. Kaliya hal dhinac oo qalabka gacanta ah ayaa loo isticmaali karaa rarida iyo dejinta robotka?
A. Gacanta aaladaha warshadaha ayaa wax ka beddeli kara barnaamijka iyo xajinta xajinta, isbeddelada degdegga ah ee bakhaarrada caqliga leh, xawaaraha khaladka, baabi'inta baahida loo qabo shaqaalaha laakiin sidoo kale waqtiga tababarka, si dhakhso ah ayaa loo soo saari karaa wax soo saar.
Q4. Ma jiraan wax kale oo mudnaan ah oo rarka iyo rarida aaladda?
A. Hagaajinta tayada Muuqaal-shaqeedyada: Khadadka wax soo saarka iswada ee robotka, laga bilaabo quudinta, isku haynta, gebi ahaanba aaladaha aaladaha, si loo yareeyo isku xirnaanta dhexdhexaadka ah, tayada qeybta si weyn ayaa loo hagaajiyay, gaar ahaan dusha sare ee quruxda badan.
Q5.Ma siin kartaa xalal buuxa oo loogu talagalay soo dejinta iyo rarida aaladda?
A. hubi, waxaan taas ku wada sameyn karnaa ganacsadeheenna.
Hore: Mid ka mid ah wareegga dhidibka
Xiga: Robot alxanka TIG